Somaliland oo shaacisay xilliga la qabanayo doorashada golayaasha wakiillada iyo deegaanka - Halbeeg News
HARGEYSA(HALBEEG)- Somaliland ayaa shaaca ka qaaday xilliga la qabanaya doorashooyinka golaha wakiillada iyo kuwa deeganaka.
Xisbiga talada haya ee Kulmiye iyo xisbiga mucaaradka ee UCID oo kulan ku yeeshay magaalada Hargeysa maanta oo Jimca ah ayaa isla meel dhigay xilliga la qabanayo doorashada golayaasha deegaanka iyo wakiilada Somaliland.
Arrimaha labada xisbi ay ku heshiiyeen ayaa waxaa ka mid ah in doorashada golayaasha deegaanka iyo wakiillada la qabto bisha Nofembar ee sannadkan 2019-ka.
Sidoo kale labada xisbi ee Kulmiye iyo UCID ayaa isku raacay in koomishanka doorashooyinka Somaliland ee hada jira uu shaqada sii wato doorashooyinkana qabto maadaama aysan jirin sabab sharci ah oo lagu kala diro.
Labada xisbi ayaa hoosta ka xariiqay in mar dambe aan la aqbali doonin in dib u dhac kale uu ku yimado qabashada doorashada golayaasha deegaanka iyo tan wakiillada Somaliland.
Sidoo labada xisbi ayaa golaha guurtida ugu baaqay in ay ixtiraamaan go’aanka ay gaareen islamarkaana mudo kordhinta ay sameynayaanna ku saleeyaan heshiiska labada xisbi.
Heshiiskan ay maanta gaareen labada xisbi ee Kulmiye iyo UCID ayaa waxaa ka maqnaa xisbiga Wadani ee uu hoggaamiyo Cabdraxmaan Cirro kaas oo aan weli wax faah faahin ah aan bixin go’aanka ka soo baxay labadaa xisbi.
Hadalka ka soo yeeray labada xisbi ayaa imaanaya iyadoo horraanta sanadkii tagay xisbiga Wadani uu qaadacay wadashaqeytii uu la lahaa koomishanka doorashooynka Somaliland.
Guddoomiyaha xisbiga Wadani, Cabdiraxmaan Cabdillahi Cirro ayaa sheegay in aysan jirin kalsooni dambe oo ay ku qabaan guddidan taasi oo ay ku qaban karaan doorasho oo Somaliland ka dhacda.
Doorashada golayaasha deegaanka Somaliland iyo wakiillada ayaa dhowr mar dib u dhac ku yimid taas oo xisbiyada ay walaac ka muujiyeen.
Saraakiil Turkiga lagu soo tababaray oo Muqdisho ku soo laabatay